Italia: Loza hamatotra ireo mpitoraka blaogy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2010 18:48 GMT
Lahatsoratr'i Arianna Ciccone nivoaka tamin'ny27 Jolay 2010 tao amin'ny Advocacy
Iray amin'ireo fepetra ao amin'ny Lalàna mifehy ny Media sy ny Fihainoan-dresaka resahana tato ho ato ao anivon'ny Parlemanta Italiana ny hoe “ireo rehetra tompon'andraikitra amina tranonkalam-baovao” dia tsy maintsy mamoaka ao anatin'ny 48 ora ny fanitsiana takian'ireo fitarainana noho ny votoatina tranonkala, blaogy, fanehoan-kevitra, tsikera sy/na vaovao amin'ny ankapobeny. Tokony hitovy endrika amin'ny nivoahan'ilay votoatin-javatra teo amin'ny aterineto niandohan'ny olana no amoahana ireo fanitsiana , na lahatsoratra io, na podcast na video. Ny tsy fanatanterahana izany dia mety hitarika sazy tafakatra hatramin'ny 12,500 euros.
Ity lalàna ity dia mikendry ny hampihàrana amin'ireo fanehoan-kevitra/fampahafantarana/vaovao alefa amin'ny aterineto – na matihanina io na mpankafy tsotra, ara-barotra na mandeha irery – ireo lalàna mitovy tahaka izay mihatra amin'ireo media tranainy nofaritan'ny lalàna tamin'ny 1948 (!), antsoina hoe Toko faha-8 mikasika ny antsoina hoe “obbliga di rettifica” na andraikitra hamoaka fanitsiana. Ny lalàna mifehy ny Media izany manomboka eto dia tsy hanavàhana intsony ny media mahazatra hatrizay sy ny tontolo be taharon'ny fifanakalozam-baovao sy/na fanehoan-kevitra anaty tranonkala.
Mety ho an'ireo mpitoraka blaogy ve, tranonkala fifampizaràna votoatin-javatra na mpanome tolotra fampitam-baovao anaty aterineto ny tsy maintsy “hamoahana” fanitsiana iray ao anatin'ny 48 ora raha misy amin'ireo votoaty, na mivantana io na ankolaka, avy amin-dry zareo ka notsaraina ho diso na manala baraka? Tsy trano mpamoaka gazety ny tranonkala. Tokony ho samy hafa ny lalàna ho an'ny media mahazatra sy ny fifanakalozam-baovao anaty aterineto. Mandany fotoana be sy sarotra ny misahana ny fangatahana fanitsiana – na dia ny handanjalanja ny fahamarinan'ilay fitarainana fotsiny aza dia tokony ilàna fandalinana araka ny fomba matihanina izay tsy ananan'ny ankabeazan'ireo tranonkala fifanakalozam-baovao anaty aterineto. Ny tena antom-pisian'ny tranonkala mihitsy ny tena voatohina – lamandy mavesatra iray dia midika avy hatrany ho fikatonana ho an'ny betsaka.
Inona no tena vokatra andràsana amin'ity tolo-dalàna ity? Mpitoraka blaogy maro sy mpandray anjara mpankafy/mpifanakalo hevitra sy mpanangom-baovao any anaty tranonkala no hanapa-kevitra tsotra fotsiny hoe aleo tsy mankahatra sy maka lagy. Mety hihemotra haka ny toerana efa nisy an-dry zareo tsara taloha ry zareo, atao hoe ireo tsy rototra mpanjifa ny vaovao. Na hanohy ny fitànana toerana mavitrika eo amin'y aterineto saingy any amin'ireo resaka tsy dia manaitra loatra raha resaka media mba hisorohana ny fifantohan-tsaina mankany amin'izy ireo. Izany rehetra izany dia mifanohitra amin'ny demokrasia tsy farofy ho an'ny vahoaka mandray anjara mavitrika sy mahara-baovao tsara.
Jereo ny fahafahana mampihatra ny fangatahana fanitsiana amina tranonkala tambajotra sosialy: voalohany indrindra dia jerena ny fangatahana (ny andro iray lany tany amoron-dranomasina na nilozoan'ny aretina dia mety hovidiana faran'izay lafo tokoa), avy eo fantarina hoe avy aiza ilay mpanoratra (ditto), avy eo mandinika ilay votoatin-javatra (ahoana ny hahafahana manamarina amin'ny fomba haingana sy matotra ny fifanakalozam-baovao efa niampitapita indroa?), avy eo manapa-kevitra raha tena mitombina tokoa ilay fangatahana fanitsiana ( sa ny fironana mandeha hoazy dia ny fanaovana fanitsiana isak'izay mihetsika mba hipetrahana amin'ny lafiny tsara antoka hatrany?), avy eo ( rehefa avy nandanjalanja tsara ny olana rehetra) angamba vao hamoaka fanitsiana. Izany rehetra izany ao anatin'ny 48 ora. Fahatapahan'ny herinaratra? Vintan-dratsy ny anao! Lohamilina tsy mandeha? Olanao izany! Lahatsoratra iray ao amin'ny tranonkala-“ko” avy amin'olona iray tsy fantatro akory mikasika resaka iray tsy mahasarika ahy velively mandritry ny maha-any ambany rano tsy taka-maso ahy any dia tonga aho dia voapaingotra 12,500 euros? Tsy fanaovan-dalàna mendrika ny demokrasia maoderina izany, halatra miharo don-tandroka.
Ny tranonkala no ho voaporitra. Ny fahafaha-miaina tokana sy , eny, ny fahafahan'ny tontolon'ny cyber no hiha-ety. Hizàka ny mangidy ny fahasamihafàna fomba fijery noho ny fisalasalàna, ny fitandremana ary ny tahotra hibàhana ny toeran'ny fahalalaham-pitenenana. Feon-kira hafa mihitsy mazàna no andihizan'ny media mahazatra. Anatin'ny raho-mitatao ny hoavin'ny fahaleovantenan'ny fanangonam-baovao sy ny fifampizarana fomba fijery ao Italia.
Tantaran'ny Italia farany
05 Janoary 2021Etazonia
22 Jona 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana